Libya: MSF oo Adeeg Caafimaad ka Bilowdey Misrata - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Koox MSF ka tirsan oo 12 qof ka kooban ayaa ka shaqeeya cusbitaalka Kasr Axmed, ee ku yaalla tuulada la go’doomiyey ee Misrata, iyaga oo qabanaya hawlo qalliin oo taageerana siinaya isbitaalka Al Xikma.
Koox MSF ka socotey ayaa timid Misrata maalintii Khamiista, ee 28-kii Abriil, si ay u xoojiyaan kooxda saddexda qof ka koobneyd ee horey muddo 10 maalmood ah halkaa u sii joogtey iyaga oo qiimeynayey baahiyaha jira. Kooxda cusub ee sagaalka qof ah – oo ka kooban laba dhakhtar oo kuwa qalliinka ah, laba suuxiye, saddex kaalkaaliye caafimaad, hal dhakhtar oo caadi ah iyo qof ku takhasusey adeegga qalabeynta ayaa waxa ay dalka Malta ka raaceen markab sidey 12 tan oo daawo iyo sahay caafimaad.
Mid ka mid ah dhakhaatiirta qalliinka ee kooxda ka tirsan waxa u hadda ka shaqeynayaa isbitaalka Al Xikma ee Misrata ku yaalla, oo ah halka loo soo gudbiyo dadka u baahan qalliinka adag, si uu dhakhtarkaas u taageero kooxda caafimaadka ee Libyan-ka ah oo labaatan iyo afarta saacba shaqeynayey muddo dhowr toddobaad ah.
Kooxda inteeda kale waxa ay u diyaargaroobayaan in ay hawlo ka bilaabaan isbitaalka Kasr Axmed, oo ku yaalla qaybta bari ee magaalada. Marka hore, kooxda waxa ay hagaajinaysaa dhismaha isbitaalka, iyaga oo dayactiraya qolka qalliinka oo habeynayana qolalka bukaanka la seexiyo.
Ujeeddadu waa in daryeel daawo iyo mid qalliin la siiyo badi dadka ku nool Misrata, oo magaalada dhinaceedan u yimid si ay ugu nabadgalaan ka dib markii ay ka soo carareen bartamaha iyo koonfurta magaalada, iyo muhaajiriinta Afrikaanka iyo Aasiyaanka ah ee ku go’doonsan agagaarka dekadda, iyaga oo sugaya doomo dalalkooda u qaado.
Tas-hiilaad, daawo iyo sahay caafimaad midna lama hayo
Marka laga soo tago daryeelka caafimaadka ee degdegga ah, qalliinka iyo kan caafimaadka carruurta, oo dhowaan la bilaabi doono, MSF waxaa u qorsheysan in ay kordhiso tirada sariiraha yaalla isbitaalka Kasr Axmed ee 12-ka sariirood ah oo ay gaarsiiso ku dhowaad 50 sariirood iyo in ay dayactirto qolka qalliinka.
Sida ay sheegeen kooxaheenna goobta ku sugan, isbitaallada Misrata sariiraha yaalla– oo ah qiyaastii 100 sariirood – iyo kheyraadka (maaliyad iyo shaqaaleba) ay haystaan aad bey uga yar yihiin kuwo ku filan dadka halkaa ku nool oo ku dhow 300,000. Marka ay timaaddo daryeelka hooyada iyo carruurta, MSF waxa ay kor u qaadi doontaa helidda daryeelka degdegga ah ee carruurta iyo haweenku helaan iyada oo diyaarineysa qol qalliin oo labaad iyo iyada oo kordhineysa tirada sariiraha bukaannada. MSF ayaa hadda ah NGO-ga Caafimaadka ee Caalamiga ah ee keliya ee jooga magaalada.
Maalinta Axadda ah, ayaa doon sidda shan shaqaale oo caalami ah ay Benghazi uga ambabixi doontaa dhinaca Misrata. Dhakhaatiirtan waxaa ay ku biiri doonaan kuwii hore u sii joogey halkaa. Kooxdan waxa ay diiradda saari doonaan daryeelka degdegga ah ee uurreyda iyo umulaha iyo cudurrada haweenka (OB-GYN), cudurrada carruurta iyo daryeelka carruurta dhasha ah ee xarunta caafimaadka ee Tubaax. Kooxdu waxa ay ka kooban tahay hal umuliso, laba kaalkaaliye caafimaad, qof adeegga qalabeynta ku takhasusey iyo dhakhtar cudurrada nafsaaniga ah ku takhasusey. Waxaa sidoo kale kooxda ka mid ahaan doona shan shaqaale caalami ah oo kale (dhakhtarka haweenka, dhakhtar suuxiye ah, maamule caafimaad, kaalkaaliye caafimaad ee qolka qalliinka iyo dhakhtarka carruurta), kuwaas oo maalinta Arbacada ah ka tegi doona Malta iyaga oo Misrata u raaci doona markab xamuul oo sida 7.5 ton oo sahay ah.
Xaaladaha xuduudda dhanka Tuuniisiya oo aan weli degganeyn
27-kii Abriil, ayaa bambooyin ay rideen ciidamo hubeysan ay waxyeello gaarsiiyeen isbitaalka Zintan, oo ku yaalla koonfurta xuduudda Libya iyo Tuniisiya. Weerarradaas ka dib ayaa kooxaha MSF waxa ay soo daad-gureeyeen 18 bukaan iyaga oo adeegsanaya baabuurta gurmadka caafimaadka ee degdegga ah waxaana ay siiyeen gargaar degdeg ah iyo daryeel caafimaad.
Ciidamada Qadaafi ayaa go’doomiyey kooxaha mucaaradka ah ee hubeysan ee joogey xuduudda Tuniisiya iyo Dehiba. Iskudhacyada ayaa weli socda, iyada oo badi dadkii soo magangaley dhinaca kale ee xuduudda ee isugu jirey haween iyo carruur, iyo sidoo kale ragba ay ku noqdeen Libya, si ay u ilaashadaan guryahooda ama ay qayb uga qaataan dagaalka. Baahiyaha caafimaadka ayaa ku badanaya Dehiba, sidaa daraaddeed xarumaha caafimaadku waxa ay u baahan yihiin in ay gacan ka helaan MSF si ay dadka dhaawaca ah u siiyaan daryeel dejinta xaaladdooda caafimaad ah, mid qalliin iyo mid caafimaadka guudba. MSF waxa ay sidoo kale daryeelka caafimaadka dhimmirka ay ku bixineysaa xerada ay ku jiraan qaxootiga Libyan-ka ah iyo bulshooyinka degaanka ay martida u yihiinba.